WARARKA SOOMAALIDA OO GOOS GOOS AH !
1)Daacuun caruur ku dilay Muqdisho
Muqdisho,26th Nov.2002(BBC NEWS)
Shan caruur ah ayaa daacuun calooleed ugu dhimatay Muqdisho iyadoo boqolaal kale oo da'doodu ka hoosayso shan jir ay haatan isbitaalda Muqdiso u jiifaan.
Waxana lagu soo waramayaa in Isbitaallada magaalada Muqdisho ay haatan la buux dhaafaya carruur shubmaysa iyadoo dhibaataduni ay si weyn u soo shaac-baxday ilaa horraantii bishaan. Sida uu sheegay Wasiiru-dowlaha wasaaradda caafimaadka, Dr Cismaan Dufle, oo Insniintii guddoominayey shir ay isugu yimaadeen madaxda qaar ka mid ah isbitaallada Muqdisho iyo hay’adaha sida hay’adda caafimaadka adduunka ee marka magaceeda loo soo gaabsho WHO, waxa haatan lagu dhawaaqi karaa in uu jiro cudurka daacuun caloolaha.
Dr Cabdikariim Casayr oo ka tirsan hay’adda caafimaadka adduunka, xafiiskeeda magaalada Muqdisho ayaa sheegay in baaritaan ay iyagu sameeyeen ay ku ogaadeen in qaar ka mid ah shubanka hadda jira uu yahay cudurka daacuun caloolaha. Dr Casayr waxa uu faah-faahiyey in ay tijaabo saxaro ka qaadeen 22 carruur ah oo shubmaysa isla markaana ay lix ka mid ah noqdeen kuwa qaba cudurka daacuun caloolaha.
Tusaale ahaan, ilaa horraantii bishaan waxa uu isbitaalka Banaadir qaabilay in ka badan 160 carruur ah oo da’doodu ay ka yar tahay shan jir oo dhammaantoodna shubmaya, waxaana u geeriyootay xauunkaasi shan carruur ah. Isbitaalka Al-Xayaat ayaa isaguna la kulmay 289 carruur ah oo shubmaysa, kuwaasoo uu mid ka geeriyooday, iyadoo haatanna ay halkaasi ku sugan yihiin 70 carruur ah. Sidoo kale, isbitaalka xabeeb ayaa isaguna haya carruur ku dhow boqol kale.
Dr Casayr-ka hay’adda caafimaadka adduunke xafiiskeeda Muqdisho waxa uu sheegay in waddamada sida Soomaaliya oo kale ah 20 ilaa 30 tijaabo oo la qaado dad shubmaya muddo saddex toddobaad ah oo isku xigta oo dabadeedna tijaabooyinkaasi laga helo toddobaadkiiba ugu yaraan shan qof oo daacuun qabta in markaasi lagu dhawaaqi karo in uu dillaacay cudurka daacuunka caloolaha, halka waddamada qaarna xitaa hal tijaabo oo daacuun laga helo lagu dhawaaqayo in uu dillaacay cudurkaasi.
Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in sannadkan ay kulmeen shuban xilliyeedkii weligiisba waqtigaan oo kale dillaaci jiray xilliga roobabka iyo sidoo kale xilligii uu isaguna dillaaci jiray cudurka daacuun caloolaha. Cudurkan daacuunka ayaa ilaa sannadkii 1994-tii ahaa mid soo noq-noqda aakhirka sannadka kasta, iyadoo inta badanna ay dhkhaatiirtu u aaneeyaan ceelasha faraha badan oo kor u dhaafaya 800 ee magaalada Muqdisho biyaha laga cabbo oo ah kuwo inta badan gacan lagu qoday, kuwaasoo qoto-dheeri ahaan la heer ah musqulaha oo ay jeermisyadu uga soo gudbi karaan, sidaasi darteedna uu cudurkan yahay mid la socda amaba ka imaanaya xagga biyaha.
2)Dad Muqdisho lagu afduubay
Si kasta ha ahaatee, gelinkii dambe ee Isniinta ayey ciidanka booliski go’aan ku gaareen in ay xoog ku soo furtaan dadkaasi afduuban, iyagoo goobta u diray in ka badan 60 nin oo aad u hubaysan, kuwaasoo weerar hubaysan ku qaaday gurigii lagu haystay dadkaasi afduubanaa. Dhallinyaradii afduubka wax ku haysatay oo aanan tiradooda la sheegin ayaa iyagana is difaacay oo rasaas ku jawaabayey ilaa laga xoog roonaaday.
3)Soonka iyo dumarka uurka leh ama nuujinaya
Axmed Kismayo,BBC - Muqdisho(26/11/2002)
Goorma ayay habboon tahay in haweenka uurka leh ama kuwa caruurta nuujinaya ay soomaan ama afuraan si aysan dhibaato u soo garin ilmaha ay caloosha ku sidaan ama ay nuujinayaan?
Dumar fara badan oo ku jira xilliyada uurka ama naas-nuujinta ayaa ka walwala dhibaatooyin ka soo gaara marka ay soomaan halka kuwo kala aysan dhegba u dhigin iyagoo ku adkaysta inay iska soomaan.
Waxa aan maqaal kan ku eegaynaa daraasad ay arinkan ka sameeyeen qaar ka mid ah jaamacadaha dalkaasi masaarida iyo khabiir Soomaaliyeed oo ku takhasusay cudurada carruurta oo isna arrintaas wax laga waydiyay.
Daraasaddan oo dhowaan ay sameeyeen jaamacadaha Azhar iyo alexenderiya ee dalka Masar waxay sheegaysaa in soonku uu saamaayn ku yeelan karayo ilmaha ku jira uurka hooyada oo ay dhibaato ka soo gaari karto, marka dhanka kale laga eegana waxa caadi ah in hooyada uurka leh ay si toos ah u gudan karto soonka iyadoo aan haba yaraatee la kulmin wax mushkilad ah.
Taasi waxay ku salaysan tahay marka si gaara loo eego xaaladda hooyo kasta ay ku sugan tahay ama u gaarka ah iyadoo la kala soocayo hooyada uurka leh ee caafimaadka qabta iyo marka ay jiraan xaalado kale oo taa ka duwan.
Baaritaanka jaamacadda Alexenderia waxa uu si gaar ah u xaqiijinayaa in xilliga uurka ay hooyadu soonka kaba helayso deganaan xagga nafsiga ah taas oo ay daraasaddu ku tilmaantay waxyaabaha ugu muhimsan marka la eego baahida hooyada uurka leh.
Arrintani waa marka loo eego hooyada uurka leh ee fayow ama xaaladdeedu ay caadiga tahay, haddiise ay hooyada uurka u wehliyaan xanuunno kale sida cudurka sokorta uuna aad u taabanayo xaaladeeda caafimaad waxa ay daraasaddu caddaynaysaa in hoyadu ayan suurtagal u noqonayn inay soonto.
Dr:Usaama Al-manuufi oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada haweenka iyo dhalmada una dhasay dalka masar ayaa sheegaya in canugga ku jira caloosha uu ku tiirsan yahay Gulucoska ku jirta dhiigga hooyada isla markaana la ogaaday in gulocoska ku jirta dhiigga hooyada marka ay uurka leedahay uu ka yar yahay midka ku jira dhiigeeda marka aanay uurka lahayn maaddaama uu canuggu isticmaalayo.
Haddaba haddii ay yaraato gulucoska ku jirta dhiigga hooyada uurka leh waxa uu dhakhtarkani tilmaamayaa in markaasi ay dhacayso in jirka hooyadu uu tamar ka dhaliyo maaddada dufanka ah ee jirkeeda ku sugan taasoo markaa dhibaato u keeni karta hooyada.
Arrintan waxay dhacdaa marka hooyadu ay isugu darsamaan uurka iyo soonka waxayna dhibteedu u badan tahay bilaha ugu dambeeya ee uurka waxana dhacda in ay dhibaato ka soo gaarto hooyada iyo ilmaha ay siddo labadaba, sidaa awgeed waxay daraasaddu ku talinaysaa in hooyadu aanay soomin bilaha dambe ee uurka.
Dr:C/laahi Faarax Casayr oo ah khabiir soomaliyeed oo ku takhasusay cudurrada carruurta kuna sugan Muqdisho ayaan isna wax ka waydiyay siyaabaha ugu habboon ee hooyada uurka leh iyo midda nuujinaysaa ay u maarayn karayaan xaaladaha ay ku jiraan marka ay damcaan inay soomaan si looga badbaado dhibaato ku timaadda ilmaha uurka ku jira iyo weliba cunugga ku jira xilliga nuugmada caanaha hooyada.
Dr:C/lahi waxa uu xusay in hooyada uurka leh ay marto saddex marxaladood oo marxalad kasta ay tahay saddex bilood oo isku xiga. Marxaladda koowad oo ah saddexda bilood ee u horeeya waxa uu sheegay Dr C/lahi in ay aad u hoosayso cunno qaadashada hooyada uurka taasoo hadddii ay soonto loo baqo hooyada lafteeda sidaa awgeedna ay haboon tahay inay afurto xilligan oo aysan soomin.